Warmly Welcome: ဝန်ခံတယ်
ရင်ခုံသံတွေ ထပ်တူကျဖို့က အဓိကပါ
ခရီးမိုင်တိုင်တွေ ဆိုတာ.. နှလုံးသားချင်းနီးတဲ့ခါ
ရှုပ်နေတာပဲ၊ ဒါဆိုလည်း နီးနီးလေးတွေအများကြီးပဲလေ
အစ်ကိုဝင်းဇော်၊ နေကောင်းသွားပြီလား၊ အမြဲတွေ့ရတော့ မယ်ဆိုရင်တော့ ၀မ်းသာစရာပဲ။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။
ရင်ခုန်သံချင်း အမြဲ ထပ်တူကျနေစေဖို့ ဆုတောင်းပေးနေ ပါမယ် အမြန်အဆင်ပြေပါစေ
၀န်ခံလိုက်ပေါ့...မင်း ..ချစ်တယ်ဆိုလဲ...သီချင်းလေး ဆိုရင်း ဆုတောင်းသွားတယ်၊ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေ
ချိန်ရင်း ချိန်ရင်းနဲ့ ကိုပေါလိုတော့ မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ သယ်ရင်းရာ။။။
ချစ်ရသူနဲ့ ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာလုပ်ရင် အကောင်းဆုံးလဲ ဆိုတော့ ၈မိုင် ရွှေဘဲမှာပဲ ပြောကြရင် ကောင်းမယ်... အိုကေမလား
ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းပါတယ် ...
ခုဆို ရွာကြီးသာသာပဲ ရှိတော့တာ တဲ့လေ ...
လာချင်ရင် အနီးလေး ပဲ ..
အားမလျှော့နဲ့...
မနေ့ ကထက်စာရင် တနေ့ ပိုနီးလာပါပြီ ...
နှလုံးသားရော ခန္ဓာကိုယ်ပါ မြန်မြန်နေကောင်းပါစေ
ကြည့်လုပ်နော် အသက်ငယ်၂နဲ့လည်း နှလုံးရောဂါ ဖြစ်တတ်တယ်
အပြင်မှာ ဝေးနေပေမဲ့ ရင်မှာ နီးနေဖို့ ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီလို သတ္တိ မျိုး ကတော့ ခိုက်တယ်... ။
do သာ do
ဒူး မဟုတ်ရင် ပေါင်ပေ့ါ... ။
ပြန်လာတော့မယ်...။ အကို့ ဆီရောက်ဖို့ သေချာ သလောက် ၇ှိပြီ... ညြီ ပန်လာရင် ဘီယာ အ၀ တိုက် မယ်.. ။အဟီးး
ရင်ခုံသံတွေ အမြန်ဆုံးနီးစပ်ပါစေ ကိုဝင်းဇော်..
"တစ်ယောက်သောသူက အရှေ့ကမ္ဘာမှာရှိနေပေမယ့် ကျန်တစ်ယောက်က အနောက်ကမ္ဘာမှာပါ။"
ဒီစာသားလေးက နှလုံးသားချင်း နီးနေသူတွေအတွက် လွမ်းရတဲ့ စာသားလေးပါ။ ကိုဝင်းဇော်ရဲ့ ခိုင်မြဲတဲ့ အချစ်တွေ အမြန်ဆုံး နီးစပ်ပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ...
အနေဝေးပေမယ့် အဝေးနေတွေ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
နှလုံးသားချင်း ရင်နှီးနေဖို့ အရေးကြီးတာပါ
အတူနေပြီး အမြင်မတူတာထက်တော်ပါတယ်လို့ တွေးပါ
ဝန်ခံလိုက်ပေါ့ မင်းချစ်တယ်ဆိုလည်း ကြာရင်ငါရှုးလိမ့်မယ် ဘယ်လိုအကြောင်းများကြောင့် ဆိုတဲ့ IMP ရဲ့သီချင်းလေးဆိုသွားတယ်ဗျာအကိုရေ အဆင်ပြေပါစေနော်။
ကိုယ်လိုချင်တာကို လိုချင်တယ်လို့ တိုက်ရိုက်ပဲ ပြောလိုက်ရောပေါ့ .. တွေ့နေပြီ ဆိုတဲ့သဘောလား
အရှေ့ ကမ္ဘာနှင့်အနောက်ကမ္ဘာဆိုပေမဲ့ ရင်ခုန်သံချင်းတော့ နီးစပ်နေမှာပါ။ ရင်ခုန်တတ်ရင်ပေါ့လေ။
ယောက်ျားများ ကြိုးစားရင် ဘုရားတောင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သာဓက ရှိတာပဲ အကျိုးမယုတ်ပါဘူး ..
ဒီလို ဒီလိုနဲ့ ကျန်ခဲ့ပေါင်းများပီ မလား
ဒီအကြောင်းလေးတွေကို ဖတ်ရတော့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ကို သွားအမှတ်ရမိတယ်။ အပေါ်ကတောင် အရင် ဆိုသွားပီးပီ။
တချိန်က ဆုရည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်လေးကို သတိရအောင် ထည့်ပေးသွားတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပိုလုပ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်မနေပါနဲ့ ဆုရည်ကိုပဲ ပြန်ဆက်သွယ် မှားခဲ့တာတွေကို တောင်းပန်ပြီး ဆုရည်နဲ့ပဲ တသက်လုံး လက်တွဲနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
ဘလော့ထဲမလည် မရောက်ဖြစ်တာ ကြာသွားပြီ၊ မရောက်ဆို အချိန်မပေးနိုင်လို့ပါ။ တောင်ကြီးရောက်နေတယ်လို့ သိရတယ်။ တစ်ရက်လောက်တော့ ချိန်းလိုက်တာပေါ့။ နောက်အပတ်လောက်ဆို ကွန်ဟိန်းဘက် သွားစရာရှိတယ်။ မှာစရာရှိတာ မှာပါ။
မောင်လေးရေ ဟုတ်မဟုတ်တော့ အမ မသိဘူး။ သိတဲ့သူတွေက ပြောကုန်ပြီ အမှန်ပဲလား။ မဟုတ်ရင်လဲ ဖြေရှင်းချက်တော့ ရေးအုန်း ။ သတိရနေပါတယ်နော်။
Anonymous ကတော့ လုပ်ချလိုက် ပါပြီဗျာ။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ မျက်နှာများတဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ ထင်မိမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အမှန်တော့ အဲဒီသဘော မဟုတ်ပါဘူးလို့ ၀န်ခံပါရစေ။ (ဆုရည်) ဘယ်သူဆိုတာ အမှန် သိတယ်ဆိုလို့ ဘလောဂ့်ဂါ (၃)ယောက်ထဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ (၃)ယောက်ကတော့ မငယ်နိုင်၊ မကဗျာ နဲ့ မီကူးမီ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြုံကြိုက်ခဲ့ရင် (ဆုရည်)ဘယ်သူ ဆိုတာ မေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့် ပို့စ်တွေကို ဂရုတစိုက် လာဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ လေးလည်း လေးစားပါတယ်။ သိကျွမ်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင် လင့်ခ်လေးတော့ ချန်ထားသင့်ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော ချစ်သောသူနဲ့ အမြန်ဆုံးပေါင်းရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ...
ရေမြေဘယ်လောက်ခြားခြား ဝေးဝေး ရင်ခုန်သံချင်း နီးစပ်ရင် ထပ်တူကျနေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ စာနာပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းချိန် မောနင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပေမဲ့ ဂွတ်နိုက်လို့ ညရောင်အောက် ရှိနေရတော့ ခံစားရပေမပေါ့။ အမြန်ဆုံး ပျော်ရွှင်ပါစေ။
Link ထားခဲ့ပါဆိုလို့ ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မမှာ ဘလောက်ဂါမိတ်ဆွေ ဆိုလို့ ဆုရည်တစ်ယောက်တည်းသာ ရှိပါတယ်။ တခြားဘယ်သူ့ကိုမှ မသိပါဘူး။ အခုသူ့ကို ဘလောက်လောကမှာ မတွေ့တော့ဘူး။ ဆုရည်တစ်ယောက် စာမရေးတာကြာပြီ ဆက်သွယ်လို့လည်း မရလို့ တနေ့က google search ထဲမှာ သူ့နာမည် ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာကြည့်တော့ အပေါ်က Anonymous သုံးထားတဲ့ ကျွန်မ ကွန်မက်ထဲက ဆုရည်အကြောင်းပါတဲ့ ပို့စ်တွေကို ကိုဝင်းဇော်ဘလောက်ထဲမှာ အကုန်လုံးလာတွေ့ရပါတယ်။ ကိုဝင်းဇော်က ဆုရည်ဘလောက်က အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဆိုတာပဲ သိခဲ့ပါတယ်။ ဒီပို့စ်တွေကို ဖတ်ပြီးမှ ဆုရည်နှင့် ကိုဝင်းဇော် ဘာပတ်သက်တယ်ဆိုတာကို သိရပြီး ဆုရည် တစ်ယောက် ဘလောက်လောကကို ဘာကြောင့် စွန့်ခွာသွားတယ်ရတယ်ဆိုတာ ကိုဝင်းဇော်ရဲ့ တခြားပို့စ်တွေကို တွေ့လို့ သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ ဆုရည်လို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ဥပက္ခာပြုပြီး အချစ်သစ် လိုက်ရှာနေတာ မဖြစ်သင့်လို့ အကြံပြုမိတာ မှားရင်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်..
ဆရာလုံ ၀င်းဇော်ရေ လာလည်ဖြစ်တာတောင်ကြာပေါ့ ဆရာလဲ ပျောက်နေတယ်နော် ?
အဆင်ပြေလား အစစ အရာရာပေါ့...?
ဝန်ခံချက်တွေကို ရုံးတော်မှ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်
“ အရိုးသားဆုံး ပြောရရင် ချစ်ခဲ့တဲ့ တို့အချစ်ဟာ ဒဏ္ဌာရီ မဟုတ်ဘူးလေ...“
တဲ့ ကိုဝင်းဇော်ရေ...ဒီသီချင်းလေး ဆိုပြလိုက်ပါတော့လား..၊
နောက်ကျမှ ရောက်တာ ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ...။